जनवादी गायक तथा सङ्गीतकार रामेश श्रेष्ठको जीवन : कम्युनिस्ट नेताहरूले बाहिर बोलेका कुरा आफू र घरमा लागू गरेनन् | Ratopati
personकुवेर गिरी exploreकाठमाडौं access_timeअसार २१, २०७६ chat_bubble_outline0
करिब ५६ वर्षदेखि जनताको दुःख र अधिकार गीतमा गुन्जाउँदै आएका जनवादी गायक तथा सङ्गीतकार हुन् रामेश श्रेष्ठ । देशको अवस्था, जनताको अवस्था बुझेर गीत बनाउने, गाउने उनको गीतले जनताको दुःख र अधिकारका बुलन्द गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक मञ्चमा गीत गुन्जाउँदा उनी कुनै माया, प्रेम तथा राजनीति दल विशेषभन्दा पनि जनताको सरोकारका कुरा राख्ने गर्छन् ।
२०२३ सालदेखि हालसम्म पनि जनताको गीत गाउँदै आएका उनी अहिले वर्षाैं पुराना राल्फाकालीन गीत रेकर्डिङ गरेर ल्याउनमा व्यस्त छन् । पञ्चायत ढल्यो, बहुदल आयो । लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि घोषणा भइसकेको छ । तर जनताको दुःख जनतामै रहेकाले सन्तोषको सास फेर्न अझै नसकेको बताउने गायक सङ्गीतकार रामेश श्रेष्ठसँग रातोपाटीको मेरो जीवन स्तम्भका लागि गरिएको कुराकानी ।
सामान्य नेपाली खाना दाल, भात र तरकारी नै मनपर्छ । यही खाएपछि पूर्ण भएको जस्तो लाग्छ । म एक सामन्ती परिवारमा हुर्किएको मानिस हुँ । मिठो भन्ने पनि मैले बुझेको छु ।
मन नपर्ने खाना केही छैन । म जनताको घरदैलोमा वर्षाैं गीत गाएर हिँडे । यो मनपर्ने, यो नपर्ने, यो चाहिन्छ भन्ने कुरो गरिब, दुःखी जनताको घरदैलोमा भन्न मिल्दैन । फोहोर र सडेगलेको खानु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
पहिला पहिला हामी बिहानदेखि गीत गाउँदै हिँड्थ्यौँ । एक गाउँमा गीत गाउँदै गर्दा ९ बजेतिर अर्काे गाउँका मानिस लिन आउँथे । लिन आउनेले खाना खाइसक्यो होला भन्ने सम्झन्थे । बिहान गीत गाएको ठाउँका लिन आउने गाउँका मानिसले सुनाउँछन् भन्ठान्थेँ । यो क्रममा धेरैजसो समय भोकै भइन्थ्यो ।
मञ्जुलको नाममा बाहिर आएको मञ्जुल र मैले लेखेको सम्झनाको पाइला भन्ने एक पुस्तक निस्किएको छ । यो किताबमा यसको विषयवस्तु उल्लेख गरेका छाँै । मैले जस्तो गीत गाए त्यस्तै चरित्र देखाएको छु । पकाउन सबैथोक आउँछ । मीठोे पनि पकाउँछु ।
सामान्य कमिज र पाइन्ट नै मनपर्छ । रङले केही फरक पर्दैन । सजिलो जे छ, जनताले जे लगाउन सकेका छन्, मलाई पनि त्यही मनपर्छ । पहिले पहिले हाम्रो पार्टीले धेरै राम्रो, आइरन गरेको लुगा लगाउनुहुन्न भन्थ्यो ।
कम्युनिस्ट नेताहरूले राम्रो लुगा, सफा लुगाभन्दा पनि गरिब दुःखीले जस्तो लगाएका छन् त्यस्तै लगाउनुपर्छ भन्ने आदर्श छाँट्थ्यो तर त्यो गलत थियो । आज नेताहरूले लगाएको पोसाक हेर्नुस् ? ।
म भने जे छ त्यही लगाएर हिँड्नुपर्छ भन्थेँ । हामी सधैँ फोहोरी, निमुखा, माग्ने, दरिद्र भएर बस्यौँ भने हीनता बोधले किचिएर कहिल्यै उँभो लाग्न सक्दैनौँ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
अहिले मसँग धेरै पैसा भए राष्ट्रका, जनहितका लागि धेरै राम्रो काम गर्थें । हामी सम्पन्न भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहँदै आएको छ । दुःखी, गरिबको उद्धार गर्न त्यस्तै भएर बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता गलत हो । म वार्षिक तीन जोर नयाँ पहिरन किन्छु ।
प्रणायाम, कपालभाँतीलगायतका एक्सरसाइज गर्छु, जसले स्वस्थलाई बलियो बनाउने गरेको छ । घरको काम पनि गर्छु । हिँडडुल पनि धेरै गर्छु । यो नै हो फिटनेस हो ।
म दैनिक बिहान ३ वटा पत्रिका पूरै पढ्छु । एफएम पनि सुन्छु । विशेष गरे अन्तर्वार्ता सुन्ने गरेको छु । केही गरेर भ्याइन भने युट्युवबाट सुन्छु, हेर्छु ।
हाम्रो युग बनाउने, इमानदार, प्रतिभाशाली, अध्ययनशील, विद्वान व्यक्तिहरूको अन्तर्वार्ता पढ्छु ।
विश्वमा के भाइरहेको छ, अमेरिका के गर्दैछ, रुस कहाँ छ सबैको विषयमा अपडेट राख्ने काम गर्छु ।
हिन्दुहरूको ज्यादतीका कारण आज क्रिस्चियन नेपालमा बढेका छन् । तल्लो जाति, गरिब भनेका छन्, हेपेका छन्, अपमान गरेका छन् । आफू हिँड्ने बाटोमा हिँड्न दिएको छैन । आफूले पानी खाने धारोमा छुन दिएको छैन ।
कम्युनिस्टका नेताहरूले बाहिर बोलेको आफूमा र घरमा लागू गरेका छैनन् । म बच्चादेखि नै धेरै अध्ययन गर्थें । हिन्दी साहित्यहरू, रसियन साहित्यहरू, नेपाली साहित्यहरू, विश्वका उत्कृष्ट रचनाहरू केके छन्, के भन्दा रहेछन्, विश्वका ठूला मानिस कसरी बनिदो रहेछ । ती वास्तविक ठूला थिएकी साना सबै कुरा अध्ययन गरेको छु । अहिले पनि निरन्तर अध्ययन गर्ने बानी छ ।
अहिले फुर्सद छँदैछैन । पहिले युवा अवस्थामा धेरै फुर्सद हुन्थ्यो । धेरै पढिन्थ्यो । अहिले फुर्सद भयो भने पढ्छु । अहिले म २३, २४ सालमा गाएको गीतहरू, त्यसपछि सङ्कल्प गीति अभियानमा गाएको प्रगतिशील गीतहरू पुनः रेकर्ड गर्न लागि परेको छु ।
धेरै मानिसले मलगायत मेरा साथीहरूलाई तिमीहरूको जीवन पछि हराएर जान्छ । त्यसैले अहिले री रेकर्डिङ गर भन्ने गर्थे । त्यो अहिले र पछिका पिढीका लागि नेपालका इतिहासमा यस्तो गीतहरू गाइएको रहेछ भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्थे । राम्रो भए गौरव गर्छन् । नराम्रो भए समीक्षा गर्लान् भन्ने हिसाबले राल्फाका पुराना गीतहरू पुनः रेकर्डमा लागेको छु । त्यसैले पनि फुर्सद छैन । अहिले ११ वटा रेकर्ड पनि भएको छ । त्यसमा सामन्ती व्यवस्था फाल्ने गीत पनि पर्छ ।
क्रिकेट बुझ्दिन । फुटबल र क्रिकेट खेलाडीले अहिले देशको नाम केही हदसम्म विदेशमा चिनाएका छन् । समय मिल्यो भने खेल हेर्न मनपर्छ । स्कुले जीवनमा धेरे खेल खेल्थेँ ।
म नोट भन्ने एउटा मात्र मोबाइल बोक्छु । मैले धेरै मोबाइल हराइसकेको छु । फोन गर्न, फेसबुक हेर्न, युट्युब हेर्न, अनलाइन समाचार पढ्न मेरो मोबाइल प्रयोग हुन्छ ।
टीभीमा समाचार हेर्छु । अन्तर्वार्ता हेर्छु । विदेशी समाचार र जानकारीमूलक विषयवस्तु हेर्छु ।
चलचित्र हेर्ने ठूलो इच्छा हुन्छ तर चलचित्र हेर्न समय नै मिल्दैन । अहिले ‘जात्रै जात्रा’ भन्ने चलचित्र आएको छ रे । त्यो हेर्न पाएको छैन । केही अगाडि ‘पशुपति प्रसाद’ हेरेको थिएँ । धेरै राम्रो चलचित्र रहेछ ।
चलचित्र त हेर्छु, अहिले पनि चलचित्र हेर्थें तर अहिले तीन घण्टा एउटा चलचित्रलाई दिने समय मसँग छैन । जुन चलचित्र हेर्दा सन्देश मिल्छ, जीवन राम्रो बन्छ, ठीक कुरो के हो भन्ने बुझाउँछ त्यस्ता चलचित्र मनपर्छ । ‘बलिदान’ चलचित्र पनि हामीले बनाएका हाँै ।
देशको, साहित्यको, सङ्गीतको प्रेम गरियो । नयाँ नयाँ कुरा बुझ्न प्रकृतिको माझमा जाने, प्रकृतिलाई बुझ्ने प्रेम गरियो । किताब पढ्ने प्रेम गरियो । प्रेम कति छन् कति ।
अहिले केटा र केटीको वा विपरीत लिङ्गीप्रतिको प्रेम मात्र प्रेम हो भन्ने बुझाइ छ । प्रेम भनेको महासागर हो । हामी केटा र केटीको प्रेममा मात्र केन्द्रित छौँ । त्यस्तो हुनु हँुदैन ।
पहिलेदेखि नै मापसे गर्दिनँ । एक दुई पटक खाएको थिए । त्योभन्दा नमीठो कुरो केही लागेन । यसमा भुल्न थालियो भने डरलाग्दो प्रभाव पार्छ भनेर बुझेर मैले प्रयोग नगरेको हो ।
गीतसङ्गीत मनपर्छ, सुन्छु । अहिले संसारमा प्रसिद्ध गीतसङ्गीत खोजी खोजी सुन्ने गरेको छु । प्रगतिशील गीत सङ्गीत गाउन मात्र होइन सुन्न पनि मनपर्छ ।
मानिसले गल्तीबाट सिक्ने हो । ‘गल्तीबाट ज्ञान भन्ने उखान’ त्यसै चलेको होइन । त्यही गल्ती बारम्बार गर्ने हो भने त्यो मानिस पतन भएर जान्छ र कहिले उँभो लाग्दैन पनि ।
भर्खरको उमेरमा खराब केटाहरूको सङ्गतमा लागेर चुरोट पनि खाइयो । त्यो मेरो भुल थियो । मेरो विचारमा बुझीबुझी गल्ती गर्नु खराब कुरो हो । अज्ञानता बस र कस्तो हुन्छ भनेर मानिसले प्रयोग गरेर पनि भुल गर्ने गर्छन् ।
सानैदेखि मैले राम्रो किताब पढेकाले खराब के हो सानैमा सिकेको, जानेको थिए । जानी नजानी गल्ती गरेभने राति निद्रा नै नलाग्ने, मनभित्र उकुसमुकुस हुने गर्छ । त्यस्ता काम फेरिन गर्न मनले दिँदैन । परिवारबाट पनि मैले राम्रो संस्कार सिकेकाले अहिलेसम्म नराम्रो परेको छैन ।
भगवानको कृपाले अहिलेसम्म त्यस्तो ठूलो रोग केही छैन । रोग भए अहिले धेरै काम गर्न पनि सक्दैन थिए । अहिले जताततै विषादी प्रयोग भएका खानेकुरा छन् । त्यही खाएर हामी बाँचिरहेका छौँ । त्यसैले कतिबेला के हुने हो रोगको के भर भयो र ?
हाम्रो सपना के हो, मलाई केले पाल्यो । यस्तो कसले बनायो, कुनकुन ढङ्गको सहयोग मैले पाएँ । सारा नेपाली बुबा, आमा, दिदी, बहिनी, दाजुभाइमध्ये कोहीले लुगा सिलाएर दिए होलान् । कोहीले जुत्ता दिए होला, कोहीले ज्ञान दिए होला, कोहीले उपचार गरे होला । मैले लाखौँ करोडौँको नेपालीको सेवा पाएको छु, थिए । उनीहरूको जीवन असल होस् । उत्कृष्ट होस् । उन्नत होस् । आर्थिक रूपले पनि धनी हुन्् भन्ने एउटा सपना हो ।
संसारमा हाम्रो नेपालको पनि पहिचान होस्, नेपालीले राम्रो काम गरेको चर्चा होस् । हाम्रा नेताहरूको कारणले देशको बेइजत नहोस् ।
हाम्रो सरकार र सरकारले फैलाउने संस्कृति खराब छ । सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू जनताले सच्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । जनताले अब उनीहरूलाई ठीक लगाउनुपर्छ ।
राशिको विश्वास गर्ने काम छैन । मेरो बुबा यस्तो कुरामा धेरै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो । बुबाले ज्योतिष देखाएको, जोखाना हेराएको, पण्डित बोलाएको मैले सानैदेखि २०, २१ वर्षको उमेरसम्म भोगँे, अध्ययन गरेँ । बाबा रामदेवले यो केही होइन, एउटा पेसा मात्र भन्नुभएको छ । मलाई पनि त्यही लाग्छ ।
राजदरबारमा हत्याकान्ड भयो । त्यहाँ धेरै राशिका मानिस थिए होलान् । हत्याकान्ड भएको दिन उनीहरूमध्ये केहीको लाभ लेखेको थियो होला, कोहीको सुखद लेखेको थियो होला । तर एकै पटक मरेर गए । यो एक अज्ञानता हो । यो मन अस्थिर हुँदा भुलाउने बाटो पनि हो । हामीले ग्रह राशिमा विश्वास गर्नु ठूलो भूल हुनेछ ।
रातभरि सुत्नु भनेको पनि मरेर उठ्नु हो । मृत्यु भनेको फेरि नउठ्ने गरेर जानु हो । यसमा आतिनुपर्ने कुरो केही छैन । यातना पाएर मरियो भने शरीरलाई पीडा होला । हैन भने मृत्यु स्वाभाविक हो ।